HORDHACA: Chelsea vs Arsenal- Wax Walba oo aad Kaga Baahan Tahay Kulanka London Derby & Wenger oo Tarabuunka Saaran Markale | Laacibiin.net
Home » Falanqeyn » HORDHACA: Chelsea vs Arsenal- Wax Walba oo aad Kaga Baahan Tahay Kulanka London Derby & Wenger oo Tarabuunka Saaran Markale
HORDHACA: Chelsea vs Arsenal- Wax Walba oo aad Kaga Baahan Tahay Kulanka London Derby & Wenger oo Tarabuunka Saaran Markale	Chelsea ayaa martigelineysa kooxda Arsenal kulanka katirsan Premier League maanta oo sabti ah, ciyaar la daawan doono saacadu marka ay tahay 3:30 Galabnimo
Chelsea ayaa hogaanka sare ee horyaalka ku heysa sagaal dhibcood oo nadiif ah, waxaana barbaro ay la gashay kulankii ugu dambeeyay kooxda Liverpool, halka Arsenal 10 dhibcood ay ka dambeyaan kooxda Chelsea, waxaana kulankii ugu dambeeyay 2-1 kaga badiyay kooxda Watford.
Blues ayaa badisay 15 ka mid ah 17 kulan ee ugu danbeyay Premier League ,laakiin Antonio Conte ayaa ku dhibtoonaya inuu ka badiyo kooxaha kamid ah afarta sare ee Horyaalka xilli ciyaareedkan -waxana kaliya uu ka badiyay mid kamid ah shantii kulan ee ugu dambeeyay.
kaliya seddex guuldarro oo horyaalka kasoo gaartay xilli ciyaareedkan kooxda Chelsea ayaa yimid iyadoo wajaheysa kooxaha Tottenham, Liverpool iyo Arsenal, waxaana kulankii hore kooxda ka dhisan Emirates Stadium bishii September ay ku badiyeen 3-0.
Tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa taribuunka fuuli doona kulankaan muhiimka u ah kooxdiisa galabta.
Tababaraha 67-sano jirka ah ee hogaamiya Gunners ayaa haatan ganaax afar kulan ah gudanaya ka dib markii uu riixay garsooraha afaraad ee kulankii Burnley iyo Arsenal ninka lagu magcaabo Anthony Taylor.
Chelsea ayaan qabin wax dhaawac weyn ah ka hor kulanka ay soo dhaweynayaan galabta kooxda Arsenal.
Conte ayaan isbedel badan ku sameyn doonin kooxdiisii kusoo bilowatay kulankii 1-1 uu la galay Liverpool, inkastoo Pedro iyo Cesc Fabregas la filayo in ay keydka kusoo bilowdaan.
Branislav Ivanovic ayaa sagaal sano kaib ka dhaqaaqay kooxda Chelsea horaantii Isbuucii lasoo dhaafay isagoo u dhaqaaqay kooxda Zenit St Petersburg.
Arsenal ayaa ka walwalsan taam ahaanshaha Alex Oxlade-Chamberlain iyo Olivier Giroud kulanka ay booqaneysa Chelsea.
ciyaaryahanka khadka dhexe ee Aaron Ramsey oo dhaawac kubka ah qaba ayaa segaya kulankaan, tababare Wenger ayaa rajeyneya Oxlade-Chamberlain inuu cafimaad helo ka hor ciyaarta, halka Francis Coquelin diyaar uu u yahay Gunners.
Giroud ayaa dhaawac yar uu kasoo garay kulankii qasaaraha ay kala kulmeen kooxdiisa Watford, laakiin Danny Welbeck ayaa taam ah. halka Santi Cazorla oo dhaawac ah iyo Granit Xhaka oo ganaax ah labaduba ay seegayaan kulankaan.
Chelsea ayaa 3-0 guul ah kasoo gaartay Arsenal bishii September waxay ahayd guuldaradii ugu cusleyd tan iyo bishii April 1997 laakiin waxaa u xigay sagaal kulan oo aan laga badin Premier League kooxda Bules.
Arsenal kama badin laba kulan oo isku xigta hal xili ciyaareed koox hogaanka u heysa Horyalka tan iyo 2003/04 –
Tababarahii ugu danbeyay ee Chelsea ee ku guuldareystaa inuu ka badiyo Gunners mid k ah lamidabadiisa kulan ee ugu horeya horyaalka waxa uu ahaa Jose Mourinho.
Wenger ayaa laga badiyay afartii kulan ee ugu danbeysay horyaalka ee uu booqday Stamford Bridge. waxaa ka badan kaliya Old Trafford oo uusan ku badin intii u dhaxeysay 2009-2013.
guuldaradii 3-0 ee kasoo gaartay Arsenal bishii September waxay u aheyd Conte tii ugu cusleyd tan iyo bishii October 2010 markaas oo uu macalin u ahaa kooxda Siena (0-3 vs Empoli).
Gunners ayaa saddex ciyaaryahan laga saaray saddexdii kulan ee ugu dambeesay Premier League oo ay booqdeen Stamford Bridge, kuwasoo kala ah (Gabriel, Santi Cazorla iyo Kieran Gibbs).
Theo Walcott ayaa ahaa ciyaaryahankii ugu danbeeyay ee Arsenal ee gool kusoo dhaliya garoonka Stamford Bridge, waxay aheyd January 2013.
Link to this post:<a href="http://www.laacibiin.net/wararka/hordhaca-chelsea-vs-arsenal-wax-walba-oo-aad-kaga-baahan-tahay-kulanka-london-derby-wenger-oo-tarabuunka-saaran-markale/">HORDHACA: Chelsea vs Arsenal- Wax Walba oo aad Kaga Baahan Tahay Kulanka London Derby & Wenger oo Tarabuunka Saaran Markale</a>